မြောက်ဦး ဆီဆိုင်တန်း မီးလောင်မှု ကျပ်သိန်း ၁ဝ ကျော်ဖိုး ဆုံးရှုံး - Yangon Media Group
မြောက်ဦး ဆီဆိုင်တန်း မီးလောင်မှု ကျပ်သိန်း ၁ဝ ကျော်ဖိုး ဆုံးရှုံး
မြောက်ဦး၊ ဒီဇင်ဘာ ၉
ရခိုင် ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဆီဆိုင် တန်းတွင် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်က ဖြစ် ပွားခဲ့သည့်မီးလောင်မှုကြောင့် ကျပ်သိန်း ၁၈ဝ ကျော်ဖိုး မီးလောင် ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ပြည်နယ်မီး သတ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ မြောက်ဦးမြို့ ထမ္မရာဇ်ရပ်ကွက်ရှိ ဆီအရောင်းဆိုင်မီးလောင်မှုကြောင့် သွပ် မိုး။သွပ်ကာ။မြေစိုက် (၈ဍ္ဍ၈ဍ္ဍ၁၃)ပေရှိ ဆီဆိုင်ခန်းကိုးခန်း၊ ဒီဇယ် ၆ဝ ပီပါ၊ ဓာတ်ဆီ ၅ ပီပါ၊ အောက်တိန်း ၂ဝ ပီပါနှင့် ပရီမီယံ ၅ ပီပါ စုစု ပေါင်းဆီပေပါအလုံး ၉ဝ မီး လောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မီး သတ်ဦးစီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
”မီးလောင်မှုကြောင့် ကျပ် ၁၈၄ သိန်း ၅ သောင်းဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ဆိုင်ခန်း ၁၃ ခန်းမှာ ကိုးခန်းလောက်လောင်သွားပါတယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသော်ဒါက အတည်ပြုပြောသည်။ မြောက်ဦးမြို့ ထမ္မရာဇ်ရပ် ကွက်ရှိ ဦးကျော်စိုးသန်း ပိုင်ဆိုင် သည့် ဆီဆိုင်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဆီပီ ပါထဲသို့ အောက်တိန်းဆီထည့်ရာမှ ဂေါက်တံလွတ်ကျကာ မီးပွား ဖြစ်ပေါ်၍ ယခုကဲ့သို့ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးသော်ဒါက ဆိုသည်။
မီးလောင်မှုကို မြောက်ဦးမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ်ယာဉ်များအပါအဝင် စစ်တွေ၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြားနှင့် မြောင်းဘွေ မီးသတ်စခန်းများမှ မီးသတ်ယာဉ် ၁၃ စီးဖြင့် မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရပြီး ယင်းနေ့ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မီးငြှိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ လက်ရှိတွင် မီးစတင်လောင် ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ဆီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို မြောက်ဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းက (ပ)၂၆၄/၂ဝ၁၈ ၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၂ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် အဏ္ဏဝါသက်ရှိ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်??
သာသနာ့အလံ တပ်ဆင်ထားသည့် ယာဉ်အတွင်းမှ တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသော ပယင်းကျောက် ၁ဝ၇ ပိဿာ ဖမ်းဆီးရမ?
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကော်ဖီစိုက် တောင်သူများသို့ ကော်ဖီ ပျိုးပင်ပေါက်များ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးသွား
LA ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်အထိ ကျင်းပမည်
ဝေဖန်မှုများအတွက် ပွဲတိုင်း သက်သေပြနေရကြောင်း တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒို ပြောကြား ခြေစွမ်း??
အောင်လံမြို့ပေါ်နွားဈေးကောက်လေလံ ရောင်းချရရှိငွေ ယခင်နှစ်ကထက် နှစ်ဆပိုမိုရရှိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုနေချိန် မေးခွန်းများကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သည့် အကောင့်ပိုင်ရှင်အား ပုဒ်??
‘လောကကြိုးဝိုင်း’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ရုပ်သံလိုင်းအချို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြမည်